I-chip entsha ye-A15 Bionic kwi-mini mini ye-iPad inomda kumandla | IPhone iindaba
I-chip entsha ye-A15 Bionic kwi-iPad mini inikwe umda kumandla
Ingelosi Gonzalez | 18/09/2021 18:00 | iPad
I-mini mini ye-iPad yenye yezixhobo ezibonisiweyo ezimbalwa iintsuku ezidlulileyo kwaye banike isimanga xa kusungulwa intetho ephambili. Ngoyilo olutsha kunye nokuhlengahlengiswa kwendawo yayo yangaphakathi kunye ne-chip ye-A15 Bionic efanayo inyuswe yi-iPhone 13. Nangona kunjalo, amanqaku okuqala abonakalayo abonisa ukuba isantya sewotshi yenkqubo I-iPad mini iyancitshiswa kwaye ngenxa yoko ukusebenza kuncinci kune-iPhone 13.
I-iPhone 13 kunye ne-iPad isabelo esincinci se-A15 Bionic kodwa ngamagunya ahlukeneyo
Iiprosesa ezinje nge-A15 Bionic inezinto ezahlukeneyo ngaphakathi njenge-CPU. I-CPU ilawula ukuqhubekeka kwemiyalelo evela kwiinkqubo ezahlukeneyo, usetyenziso kunye neenkonzo zenkqubo yokusebenza. Isantya esenziwa ngayo le miyalelo sivumela ukunika ngakumbi okanye ngaphantsi umfanekiso oyinyani wokusebenza kunye namandla kweprosesa. Umzekelo, i-CPU evalwe kwi-3,2 GHz iya kuvelisa i-3.200 yezigidigidi zemijikelezo ngomzuzwana.
Eyokuqala amanqaku ipapashwe i-iPad mini 2021 kunye ne-iPhone 13 show ntsebenzo eyahlukeneyo ine-chip efanayo ye-A15 Bionic. I-mini mini ye-iPad inika iziphumo zamanqaku ayi-1595 ngesiseko esinye kunye namanqaku angama-4540 ngovavanyo lwe-multicore. Kwimeko ye-iPhone 13, amanqaku angama-1730 afunyenwe ngesiseko kunye nakwimulticore amanqaku angama-4660. Oko kuthetha ukuba phantse I-mini mini ye-iPad iphakathi kwe-2 kunye ne-8% yamandla kancinci kune-iPhone 13.
I-mini mini ye-iPad inyusa inkumbulo yayo iye kwi-4 GB
Esona sizathu siphambili sale datha silele kwisantya sewotshi (okanye isantya) se-A15 Bionic chip njengoko besesitshilo ngaphambili. Inkqubo ye- I-iPhone 13 ivalwe kwi-3,2 GHz Ngelixa le I-iPad mini inqunyelwe kwi-2,9 GHz. Lo mahluko unokuthethelela oku kuncipha kwamandla eprosesa.
Nangona kunjalo, I-Apple iyazi ukusikelwa umda kwe-A15 Bionic kwaye iyayazi nokusetyenziswa okunikwa zombini i-iPhone kunye ne-iPad mini. Ke ngoko, siyaqonda ukuba olu tshintsho luvela eCupertino kwaye nangona ngekhe sazi ukuba kutheni ngaphantsi, okucacileyo kukuba abasebenzisi abayi kuqaphela oku kuncipha kwintsebenzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » I-chip entsha ye-A15 Bionic kwi-iPad mini inikwe umda kumandla
I-Apple sele ivumela iAppleCare + ukuba yandiswe eSpain, eFrance nase-Itali
I-Apple ipapasha ukhenketho olukhokelwayo kunye neendaba ze-iPhone 13 entsha